XAL - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
Weyer PA6 ama PA12 marinnada iyo qalabka la xiriira ee WQG, WQGM, WQGDM ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha tareenka. Alaabooyinkani waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan oo ka hortagga dabka, oo aan lahayn halogen, fosfooras iyo cadmium. Waxaa lagu caddeeyay heerka dabka iyo qiiqa ee yurub iyo caalamiba, EN45545-2, R22 / R23.
Mid kamid ah suuqyadeena waa wiishka. Sanadahan, warshadaha wiishka ayaa si xawli ah u koray. Tuubbada Weyer iyo dhejiska iyo qanjidhada xargaha ee caadiga ah ayaa kaalin ilaalin ka ciyaara warshadan. Waxay yihiin ka hortagga dabka, gabowga kuleylka, waxay leeyihiin IP68 wanaagsan ama IP69k. Waxaan ku guuleysanay sumcadda sare ee macaamiisha wiishka gudaha iyo dibaddaba.
Shan sano ka hor, gawaarida cusub ee tamarta ayaa si ballaaran ugu baahday Shiinaha. Waxaan ka caawinnay macaamiishaas inay qaabeeyaan xalka ilaalinta oo dhan. Weyer gaar ah EMC qanjidhada xargaha iyo M23 isku xirayaasha ayaa la soo dhoweeyay oo gebi ahaanba la isticmaalay. Hadda waxaan weli ka qayb qaadannaa naqshadeynta mashruuca caalamiga ah ee aaggan.
Tamar la cusboonaysiin karo oo si weyn looga isticmaalo adduunka, mashruuca tamarta dabaysha ayaa codsanaysa xalka ilaalinta sare. Weyer tuubada walaaca farsamada sare iyo qanjidhada xargaha ayaa la kulmi kara isla heerka mashruuca. Mawjadahayaga, qanjidhada ayaa lagu rakibay koronto-dhaliye, sanduuqa xakamaynta heerkulka, Dareeraha xawaaraha isbedbeddela iyo jirka munaaradda.
Nidaamka ilaalinta Weyer sida marinnada iyo dhammaan noocyada isku xirayaasha dunta ayaa ilaaliya nooc kasta oo mashiin ah warshadan. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loogu adeegsadaa Xarunta Port, mashiinka tubaakada, mashiinka irbadda, mashiinka mashiinka, iyo aaladda mashiinka iwm.
Nalalka warshadaha sidoo kale waa warshadeena muhiimka ah ee aan ku lug leenahay. Wax soosaarka Weyer wuxuu ku qancay macaamiil badan oo ka tirsan aagag kala duwan oo isticmaalaya Laydhka. Waxaan u qaabeynay badeecooyin gaar ah sida biyo mareenka heerkulka sare iyo qanjidhada, waxyaabaha ka hortagga dabka ee V0 iyo tubbooyinka gabowga ee Heat sida caadiga ah OC / T29106
Nidaamka ilaalinta Weyer looma isticmaalo oo keliya ballamaha korantada ee isu taga, laakiin sidoo kale khadad badan oo otomaatig ah iyo aalado isdaba-joog ah. Baaxad buuxda oo loo maro marinnada iyo iskuxirayaasha waxay la kulmi karaan shuruudaha warshad kasta. Qanjidhadayada ayaa ka gudubtay shahaadada ATEX & IECEx ee aagga halista ah.
Hadda waa xilligii 5G. Waxaan ilaalinaa waqtiyada. Weyer polyamide tubings iyo qanjidhada hawo-mareenka ayaa buuxin kara shuruudaha mashaariicda isgaarsiinta. Hawo-mareenadeena ayaa hakin kara socodka hawada sare si ay isugu dheelitiraan hawada kulul iyo hawada qabow gudaha ama banaanka sanduuqa waxayna ka ilaalin karaan fiilooyinka biyaha iyo boodhka (IP67).